Nguva yeHurumende yeMubatanidzwa Yokurukurwa neNyanzvi
Gumiguru 21, 2010
Nyaya yekuti hurumende yemushandira pamwe yogurwa here kana yasvika makore maviri, kana kuti kwete, inyaya yava kukonzeresa mutauro mukuru, sezvo vamwe vari kuti ngaiparadzwe kana makore maviri akwana, vamwewo vachiti ngaimbopiwa mukana kusvikira zvinhu zvanaka.
Mutungamiri wenyika, uye vari mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, vakazivisa svondo rapera kuti havasi kuzobvuma kuti hurumende yemubatanidzwa iwedzerwe nguva, vakati sarudzo dzichaitwa kunyange pachine zvimwe zvisati zvapera kugadziriswa, zvakaita sebumbiro idzva remitemo yenyika.
Chibvumirano cheGlobal Political Agreement chinoti hurumende iyi inogona kuparadzwa kana rimwe bato rakabuda kubva muhurumende.
Hukama pakati paVaMugabe naVaTsvangirai hwasvika kwamvura yacheka makumbo, sezvo VaMugabe vari kunzi vari kuita zvehumbimbindoga pakuita basa rehurumende.
Asi chibvumirano chakanyoreranwa pasi nemapato matatu ari muhurumende, chinosungira VaMugabe kugara pasi naVaTsvangirai, vowirirana vanhu vanofanirwa kupihwa mabasa epamusoro muhurumende.
Asi rimwe bato reMDC inotungamirwa naVaArthur Mutambara, rinoti hakufanirwi kuitwa sarudzo sezvo zvinhu zvisati zvagadzikana. MDC inotungamirwa naVaTsvangirai inoti yakagadzirira kupinda musarudzo, kana dzichiitwa pasina mhirizhonga.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira, VaCharles Mutasa, pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, uye vari Programs Manager veCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPedzisai Ruhanya, vanobvumirana kuti hurumende iyi inofanirwa kuparadzwa, asi panofanirwa kutanga paiswa hurongwa hwekuti sarudzo dzigoitwa murunyararo.
Hurukuro naVaCharles Mutasa Pamwe naVaPedzisai Ruhanya